November 2017 – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ခုလို ချစ်နေရအောင် ယောကျာ်းအဲ့လောက်ရှားလားးးတဲ့! မေးရက်လိုက်တာ . . .
30/11/2017 Yawthama0Comments
မေ့ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတရ် မပြတ်သားနိုင်သေးဘူး ဒါကြောင့် မာနမရှိတဲ့မိန်းမလို့ ကျွန်မ ကို လူတွေ သတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်… အချိန်တိုင်း မဟုတ်ပေမယ့် အမှတ်ရစရာတွေရှိလာတဲ့အခါ အားရပါရ မောင့်ကို ကျွန်မ လွမ်းလိုက်တရ် … ” ငါမလွမ်းဘူးလို့ အားတင်းရင်း မျက်စိစုံမှိတ်
သူ့အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ အသုံးမချခဲ့တဲ့ မာန လေး ထားလိုက်စမ်းပါ…
ထားခဲ့ချင်တဲ့ သူကို မတားချင် စမ်းနဲ့ ” ထွက်သွားလိုက် “လို့သာ ပြောလိုက်… သူ့အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ အသုံးမချခဲ့တဲ့ မာန လေး ထားလိုက်စမ်းပါ… နှောက်ယှက်ခွင့်မပေးစမ်းနဲ့ အလိမ်ညာ စကားတွေ မောင်းထုတ်လိုက်စမ်း အမှတ်တရတွေ မေ့ပစ်ထားလိုက်စမ်း
ထာဝရဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အရာ … ဒါကို သိရှိခဲ့ပြီ
သူ ကျွန်မ ကို ချစ်ရက်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်နေခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီအနည်းငယ်လောက်က အထိ… သူ့ အတွက် ကျွန်မ က စိတ်ရှုပ်စရာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုတာ ကျွန်မ တကယ် မသိခဲ့တာပါ…… ကျွန်မ ဖုန်းဆက်တော့
“နာကျင်မှုတွေကို စာနာသလိုနဲ့ နောက်တော့ ရင်ကို စုံကန် သစ္စာမဲ့သွားကြတာပဲ “
ကျွန်မ ဘဝ မှာ ချစ်သူတွေထားခဲ့ဖူးးတရ်… ယုံကြည်ပြီး ချစ်ခဲ့တရ် ဒါမယ့် ကြုံဖူးခဲ့တဲ့အချစ်တွေက အကြောင်းပြချက် အမျိူးမျိုးနဲ့ ထွက်သွားကြတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေပဲ… “နာကျင်မှုတွေကို စာနာသလိုနဲ့ နောက်တော့ ရင်ကို စုံကန် သစ္စာမဲ့သွားကြတာပဲ ” “ချစ်ပါတရ်
ကျွန်မ အနားမှာ မပျော်တော့လို့ မောင်ထွက်သွားချင်ပြီဆိုရင် အစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပါ မောင် လို့ မှာချင်တရ်…
ကျွန်မ အနားမှာ မပျော်တော့လို့ မောင်ထွက်သွားချင်ပီဆို အစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပါ မောင် လို့ မှာချင်တရ်… မောင့် အချစ်က တခြားတစ်ယောက်အတွက်ဆို မောင် သူ့ကို တော့ မလှည့်စားနဲ့နော်လို့ မှာချင်တရ် … မောင်အခြားသူနဲ့လက်တွဲတော့မှာကို
ကျန်ရစ်ခဲ့ရင် နာကျင်မယ်ဆိုတာ သိလျက် သူထားရစ်ခဲ့တာ
မချစ်တော့ဘူးးလို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေချိန် ရင်ထဲမှာ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေတာ မလွမ်းဘူးလို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြတ်သားနေချိန် အသက်ရှုရပ်မတတ် သတိရနေတာ မငိုပါဘူးလို့ အကြိမ်ကြိမ် အားပေးနေချိန် ပါးနှစ်ဖက်က ပူနွေးစ ပြုလာတာ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာကို လူ အများမမြင်အောင်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ပတ်သက်လို့ လူတစ်ယောက်ထဲထံမှ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေရ ရှိတယ်လို့ သမီး သတ်မှတ်ယုံခဲ့တုန်းကတော့ သမီး ပျော်တယ် ဖေဖေ…… ပျော်ခဲ့တယ် ပေါ့ ……
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ပတ်သက်လို့ လူတစ်ယောက်ထဲထံမှ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေရ ရှိတယ်လို့ သမီး သတ်မှတ်ယုံခဲ့တုန်းကတော့ သမီး ပျော်တယ် ဖေဖေ…… ပျော်ခဲ့တယ် ပေါ့ …… .လူတွေက ပြောင်းလဲတတ်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမယ့်…. ပြောင်းလဲမှူတွေနဲ့ကြုံတိုင်း….သမီး မျက်ရည်ကျတတ်တာ ပျော့ညံ့ချက်တစ်ခုလို ပဲ
တောင်ဒဂုံ၅၄ရပ်ကွက် တိုင်းတံခွန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် #ကျောင်းနေကျောင်းစား၁၀ကျောင်းသားတစ်ဦး #ဆွဲကြိုးချမှုဖြစ်ပွား….
တောင်ဒဂုံ၅၄ရပ်ကွက် တိုင်းတံခွန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် #ကျောင်းနေကျောင်းစား၁၀ကျောင်းသားတစ်ဦး #ဆွဲကြိုးချမှုဖြစ်ပွား…. လွှတ်တော်မှအပြန်နေ့လည် ၃နာရီလောက်မှာ၅၄ရပ်ကွက်NLDအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါ်ဌေးကြည်မှဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာသောကြောင့်ဖြစ်ပွားနေရာသို့ချက်ခြင်းသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်.. ကျောင်းရောက်သောအခါဖခင်ဖြစ်သူ ဘုန်းဘုန်းကြီးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံပြီးလိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်..ဒုရဲမှူးဦးမောင်မောင်ဦးမှလည်း သေသေချာချာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပါတယ်..BODYကိုတော့ရွှေသံလျှင်နာရေးကူညီမှုမှပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်.. ကိုညီညီ တောင်ဒဂုံအမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ် #ZMT
ခြေလက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ပထမဆုံးခြေတစ်လှမ်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြေကွဲသွာစေခဲ့
ခြေလက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ပထမဆုံးခြေတစ်လှမ်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြေကွဲသွာစေခဲ့ _________________________________ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ အသက်(၄)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ဟာ မွေးဖွားစဉ်ကထဲက လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေထောက်နှစ်ဖက် မပါပဲ မွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ပထမဦးဆုံး လမ်းစလျှောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဗီဒီယိုကို မိခင်ဖြစ်သူက လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။